Tantara an-dampihazo :: Nahasarika olona maro ireo tantara roa nolalaovina tetsy Antsahamanitra • AoRaha
Tantara an-dampihazo Nahasarika olona maro ireo tantara roa nolalaovina tetsy Antsahamanitra
Talanjona avokoa ireo mpijery maro tonga tamin’ilay fampisehoana tantara an-dampihazo, tetsy Antsahamanitra, omaly tolakandro. Ny tantaran’ny “Les septs contres Thèbes” sy ny “Les Perses” no noentin-dry Mireille Herbstmeyer sy Girard Philippe, ary Fréderic Giroutou Le Sacripan; ho an’ireo mpanatrika.
Tsiahivina fa sanganasan’ i Eschyle ireo, sady piesina tantara an-dampihazo tranainy indrindra hatramin’ izay nisian’ity haikanto iray ity. Tany Gresy no niandohan’izany, ary dimanjato sy roa arivo taona tany aloha no nanoratana azy. Ravaka sy fitafiana hafa kely, nataon’i Pierre-AndréWeitz, no nampihaingo ireo mpilalao telo mianadahy. Nanampy azy ireo tamin’ ny fandikana ny tantara tamin’ny Teny frantsay
i Olivier Py. Vitan’ireto mpanakanto ireto ny nampiaina sy nampirindra tanteraka ny seho, tetsy Antsahamanitra.
Tsy nijanona tamin’ny famerenana fotsiny ny seho efa nitranga tany aloha be tany izy telo mianadahy fa nitondra zava-baovao teo amin’ny lafiny fampiainana tantara ihany koa. Fanampin’izany, mpilalao matihanina sy efa zatra niaraka izy ireto ka tafita tany amin’ny mpijery ny hafatra.
Hita taratra teny amin’ny endrik’ireo mpankafy ny hafaliana sy fahafaham-po. “Faly izahay satria afa-po ny olona rehetra. Tsy nampoizinay mihitsy hoe mbola betsaka tahaka izao ny Malagasy mankafy teatra”, hoy i Girard Philippe, iray tamin’ireo mpandray anjara.
Betsaka ireo mpanatrika no mbola maniry ny hiverenan’ny hetsika tahaka izao satria sady fahafinaretana ho azy ny fampisehoana nojereny, no nahazo fahalalana koa izy ireo.
Fitrandrahana volamena :: Olona am-polony tototry ny tany ao anaty tonelina